Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. स्तनपान नगराउने महिलामा क्यान्सरको जोखिम – Emountain TV
काठमाडौं, १६ साउन । नवजात शिशुको शारिरीक तथा मानसिक बृद्धि विकास र स्वस्थ्य जीवनका लागि आमाको दुध अपरिहार्य पदार्थ हो । जन्मिएको छ महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
तर, पछिल्लो समय विभिन्न खाद्य पदार्थ सेवन गराउने क्रम बढेसँगै नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउन थालेका छन् भने स्तनपान नगराउने महिलामा क्यान्सरको जोखिम समेत बढ्न थालेको छ ।
नजवात शिशु र वालवालिकाको स्वास्थ्य र आमाको शारिरीक तन्दुरुस्तीका लागि पनि स्तनपान अपरिहार्य हो । तर, पछिल्लो समय स्तनपान गराउन भन्दा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ ।
जसका कारण नवजात शिशुहरुमा विभिन्न खाले रोगका संक्रमण देखिन थालेका छन् भने स्तनपान नगराउने महिलामा क्यान्सर लगाएत विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ ।
यहि सन्दर्भमा हरेक वर्ष अगष्ट महिनाको १ तरिख देखि ७ तारिखसम्म विभिन्न नाराका साथ मनाईने स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि स्तनपान र जीवनको आधार भन्ने नाराकासाथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइँदै छ । विश्वभरीका शिशु तथा बालबालिकाको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक बृद्धि–विकास र स्वास्थ्यको सुधारका लागि स्तनपानको प्रबद्र्धन सम्बन्धि सहयोगका लागि सन् १९९० देखि हरेक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन शुरु गरिएको हो ।
जन्मेपछि ६ महिनासम्मका शिशुलाई पूर्णत स्तनपान गराउनु पर्दछ । शिशुको अधिकतम बृद्धि–विकास जन्मेको ६ महिनासम्म हुन्छ । त्यसकारण शिशु जन्मनासाथ सकेसम्म छिटो १ घण्टाभित्र शुरु गरी ६ महिना नपुग्दासम्म लगातार स्तनपान गराएमा शिशुको सम्पूर्ण बृद्धि—बिकासका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि हुन्छ ।
शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आमाको शारीरिक बनावटमा समेत परिवर्तन आउने र गर्भान्तरमा समेत सहयोग पुग्ने विशेषज्ञ बताउँछन् । स्तनपान गराउँदाको पहिलो ६ महिनासम्म ९८ प्रतिशत प्राकृतिक तवरले गर्भान्तर हुने गरेको छ ।
स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, मधुमेह र सुत्केरी पछि मनोरोगको संभावना समेत स्तनपानका कारण न्युन रहन्छ । कुपोषणका कारणले विश्वका ४५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ अनुसार विश्वका ६ महिनासम्मका शिशुमध्ये करिब ४० प्रतिशतले मात्र प्रचुर मात्रामा स्तनपान गर्न पाएका छन् ।
२०७३/७४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६ महिनासम्मका २५ प्रतिशत र २३ महिनासम्मका जम्मा ६३ प्रतिशत शिशुको मात्र बृद्धि अनुगमन गरिएको छ ।
सुत्केरी आमालाई काममा भन्दा शिशुसँगै सकेसम्म धेरै समय रहन दिनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कामकाजी आमालाई सुत्केरी विदा वा शिशुसंगै राखेर काममा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिए बाल मृत्युदर र कुपोषणको दर घटाउन सहज हुने छ ।